Why should we hire you? ﻿
Tags: Hire Job Jobless Interview Questions.
ဒီမေးခွန်းက ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။ ကိုယ့် အရည်အချင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ဘာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ စတဲ့အရာတွေကို မေးတဲ့မေးခွန်းပါ။
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေတဲ့အခါမှာ လေသံမှန်မှန်နဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို ဦးစားပေး ပြောဆိုပါ။ ကိုယ်ကလည်း ဒီအလုပ်ကို လိုအပ်သလို အလုပ်ကလည်းကိုယ်လို အလုပ်လျှောက်သူမျိုးကို လိုအပ်တဲ့ အကြောင်း သိသာ၊ မြင်သာ ရှိအောင် ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော ကိုယ်က အခြားအလုပ်လျှောက်သူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် မတူတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိကြောင်း ပေါ်လွင် ထင်ရှားအောင် ပြောဆိုနိုင်ရပါမယ်။ သဘောတရားအရ ပြောရလွယ်ကူပေမယ့် တကယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ကိုတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစွာ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကတော့ လုပ်ငန်းအကြောင်း ကြိုတင်လေ့လာထားခြင်း၊ ကိုယ့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် (CV) ကို အလုပ်ခေါ်စာပါ လိုအပ်ချက်များနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ထားခြင်းတို့အပြင် ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ စကားအပြောအဆို လိမ္မာပါးနပ်ခြင်း၊ တစ်ပါးသူ၏ လိုအပ်ချက်ကို နားလည်လက်ခံနိုင်ခြင်းစတာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ www.jobless.com.mm